Dị ka PDF Ngwọta iji Formstack na Webmerge
Wenezdee, Jenụwarị 23, 2013 Friday, February 27, 2015 Douglas Karr
M na-eleta otu n'ime ndị na-akwado nkà na ụzụ anyị '(Mpempe akwụkwọ) Ndị ahịa ụnyaahụ iji kpaa mkparịta ụka mara mma ha na-arụ ọrụ. Ihe masịrị m bụ na ha rụchara ọtụtụ njikọ ahụ n'agbanyeghị na ha enweghị ihe mmepe ọ bụla na ndị ọrụ ha.
Otu akụkụ dị ukwuu nke ọrụ ha bụ inwe ụdị nke ndị ọrụ ahịa, atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa dechara. Nsonaazụ njedebe bụ PDF ụfọdụ akọwapụtara nke ọma ma nyefee ya na ụlọ ọrụ ibe ha na kọmputa. Ha mezuru nke a n'enweghị ike iji ya Formstack na WebMerge. N’agbataMpempe akwụkwọ Nchịkọta onye ọrụ dị mfe iji mepee ajụjụ a na ikike WebMerge iji maapụ data ahụ ma wepụta PDF… sistemụ ahụ rụrụ ọrụ n'enweghị ntụpọ.
naMpempe akwụkwọ Njikọ WebMerge ị nwere ike ịmepụta akwụkwọ PDF site na ntinye akwụkwọ, zipu ozi ịhazi ahaziri, wee ziga akwụkwọ PDF edepụtara na-akpaghị aka. Nke a bụ a n'ezie ike mwekota na ike ikwe ka a azụmahịa mfe ike omume tiketi, contracts, nkwekọrịta ọrụ… ị aha ya!
Gbanwee usoro ihe okike gị site na akpaghị aka na-ewepụta akwụkwọ PDF site na ntinye akwụkwọ gị. Mbido dị ngwa ma dịkwa mfe.
Tags: ụdị nrubeisiụdị ka pdfformsmpempe akwụkwọTechwebmerge
Etu esi eweputa nsụgharị Facebook
Jan 24, 2013 na 5: 18 AM
Usoro ihe dị ka nke a ọ na - arụ ọrụ “n’enweghi ntụpọ” nke ọma otu ị dere?
Jan 24, 2013 na 9: 06 AM
Ee, ana m eguzo n'akụkụ m iji okwu ahụ. 🙂